Drama, Essays.. » ကျနော့်ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်ဆန်း	20
Posted by Thint Aye Yeik on Aug 10, 2016 in Drama, Essays.., My Dear Diary, Short Story | 20 comments
uncle gyi says: သရဲပြန်လန့်တယ်ဆိုတော့လဲထူဆန်းတဲ့လူပဲပြောရတော့မယ်
uncle gyi says: ထိုအချိန်မှစပြီးသရဲခြောက်သောထိုအခန်းမှာ
Thint Aye Yeik says: ဇာတ် ပေါင်းသော်. . . .
kotun winlatt says: အဲ့လူက အိပ်နေတာရော ဟုတ်ရဲ့လားအေ . . .
Thint Aye Yeik says: ပင်ပန်းလွန်းလို့ တကယ်ကြီး အိပ်ပျော်သွားတာလေ။
မမချွိ says: အဲဒီ သရဲ ဆိုတာ အချစ်ကို တင်စားထားတာလားငငင်??
Thint Aye Yeik says: ဒါပေမဲ့…. အချစ်က တံခါးလာခေါက်ချိန်(ဗြူးဗြဲ လာ ခြောက်ချိန်)မှာတောင်…
ကိုယ်က အိပ်လိုက်တာ…သိုး….နေလို့… အချစ်နဲ့လည်း မတွေ့လိုက်ရသေးဘူးတို့… ဘာတို့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 236
Foolish Girl says: တစ်ခါတလေလွဲလွဲလေးလည်းကောင်းပါတယ်
Thint Aye Yeik says: စိတ် ကျေနပ်ရင် ပြီးတာပဲ. . .
ဂျစ်စူ says: အိုင်ခုစကား ငှါးပြောရရင်တော့
kai says: လုပ်တတ်တဲ့ ဘိုခင်ညွန့်တို့အုပ်စုကတော့.. ခေါင်းလောင်းသရဲကို မဟာမြိုင်ဘုန်းကြီးနဲ့လုပ်စားသွားတာ.. မီလီယံချီထောသွားပြီ…။
ကျုပ်တို့က.. လေ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12168
Thint Aye Yeik says: သရဲခြောက်တဲ့အခန်းကို နိုင်ငံခြားသားတွေ စိတ်ဝင်စားလား မစားလားတော့ သေချာမသိ။
စားရုံတင်မဟုတ်… အဲ့ဆိုင် အဆောက်အဦးကြီးက ရှေးခေတ်ဒီဇိုင်းကြီးမို့… ရုတ်တရက် ကြည့်ရင် သရဲခြောက်တဲ့ အိမ်ကြီးလိုလို..မို့… အဆောက်အဦးနောက်ခံနဲ့ အမှတ်တရပုံတွေ ရိုက်ကြတာ… မနည်း… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: House of Memories က ကိုလိုနီလက်အောက်တုန်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လျို့ဝှက်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာ . . . အဲဒါကြောင့်လည်း နာမည်ကြီးတယ် . . အထဲမှာလည်း အမှတ်တရတွေ ပြထားတယ် . . . အစားအသောက်ရော service ရော ကောင်းတယ်
Thint Aye Yeik says: အဲ… မသိခဲ့ဘူး။ သမိုင်းကို အဲ့လောက် လေ့လာထားတာသာကြည့်။
Ma Ei says: ကလောဟိုတယ် အဟောင်း အပေါ်ထပ်အခန်းမှာ ကိုယ်က အိပ်ချင်မူတူး တဖက်ခန်းက ရေချိုးလိုက် ရေဆွဲချလိုက် တခါးအဖွင့်ပိတ်တွေလုပ် တစ်ညလုံးမအိပ် သွားတောင်ပြောမလို့ မပြောဖြစ်လို့သာ မနက်ကျ ဘိတ်ဖတ်စားရင်း ၀ိတ်တာလေးကို ပြောမိ ပြုံးစိစိနဲ့ စိတ်တိုရသေး နောက်ညလဲဒီတိုင်း မနက်ကျ နောက်တယောက်ထပ်ပြောတော့မှ အဲ့ခန်းလူမရှိဘူးအန်တီတဲ့ နှစ်ရက်နေမှ သရဲခြောက်မှန်းသိ သရဲစိတ်ညစ်သွားလောက်တယ်…
Thint Aye Yeik says: ဟုတ်ပါ့…။ တချို့လူတွေကို သရဲတွေ လက်မြှောက်ထားရမှာပေါ့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 115
Tawwin Pan says: ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ ကြုံဖူးတယ်။ ကုတင်ကလှုပ်သလိုလိုထင်နေတာ။ ဘေးက သူငယ်ချင်းကိုမေးတော့ သူမသိဘူးဖြေလို့ ငြိမ်နေလိုက်တယ်။ နေ့လည်တရေးတမောအိပ်ပြီး နိုးလာတော့ သူငယ်ချင်းက ဟိုတယ်ဝန်ထမ်း က တံခါးလာခေါက်လို့ တံခါးဖွင့်ပေးတာ ကိုယ်တွေရဲ့အခန်းရှေ့က အခန်းမှာ မိန်းမတစ်ယောက် သူ့ကို စိုက်ကြည့်နေတယ် ဆိုတဲ့ အိပ်မက်မက်တယ်တဲ့။ အပြင်မှာ တကယ်တော့ မျက်နှာချင်းဆိုင်အခန်းမရှိပါဘူး။ ညနေကျတော့ အပြင်ထွက် စားသောက်ပြီး ပြန်လာ တီဗီကြည့်ကြတာပေ့ါ။ ည (၁၀)နာရီလောက်ကျတော့ ရေပန်းကနေ ရေကျသံတွေကြားရတယ်။ ကိုယ်က နားမကောင်းတော့ စိတ်ထင်တာနေမှာပါလေ ဆိုပြီး ထပ်ငြိမ်နေလိုက်တယ်။ ညကျတော့ သန်းခေါင်ကျော်ကြီး အခန်းထဲမှာ တခုခု ပြုတ်ကျသံကြားလို့ လန့်နိုးသွားတယ်။ အိပ်နေရင်း စားပွဲပေါ်က ပစ္စည်းတခုခုများ ကန်ချမိလားလို့ ထကြည့်တော့လည်း စားပွဲပေါ်ကပစ္စည်းတွေက ဒီအတိုင်းသား။ ကြမ်းခင်းပေါ်မှာလည်း ဘာပစ္စည်းမှ ကျမနေဘူး။ ပြန်မအိပ်သေးဘဲ ဆက်စောင့်ကြည့်နေလိုက်သေးတယ်။ ဘာသံမှ မကြားရတော့လို့ ပြန်အိပ်ပျော်သွားတယ်။ အဲဒီဟိုတယ်က Check-Out ထွက်တော့မှ သူငယ်ချင်းကို မေးရတယ်။ ညက ရေပန်းကနေရေကျသံကြားမိလားဆိုပြီးမေးတော့ သူကကြားတယ်တဲ့။ နင်ကြောက်မှာစိုးလို့ မပြောတာတဲ့။ အဲဒီအထပ်မှာလည်း အခြားဧည့်သည်ဘယ်သူမှမရှိဘူးရယ်။
Thint Aye Yeik says: .မကြောက်တဲ့သူတွေ… ကြောက်ရကောင်းမှန်း မသိတဲ့သူတွေ…
မှော်ဆရာ says: သူရဲခြောက်တဲ့ အိမ်ကြီးထဲ ၀င်မိတာ ဆံပင်ဖားလားနဲ့ သရဲမကို နောက်ကျောခိုင်းကြီးတွေ့တယ်။။
Thint Aye Yeik says: ဟီဟိ။ ဟုတ်ပါ့။ သရဲအကြောင်း တွေးလိုက်တိုင်း…. ပြေး သတိရတတ်တာက…
သရဲက အရမ်းလန့်သွားတဲ့ပုံနဲ့… သူ့ရင်ဘတ်အရှေ့မှာ လက်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့ ယက်ခက်ပြီး..ကလူကလူတောင် လုပ်ယူနေရသေး။ အဲ့ဒါမျိုးတွေ ကြည့်ခဲ့တော့ သရဲလည်း မကြောက်တော့သလိုပဲ။
ပြီတော့…တစ်ခါမှလည်း သရဲအခြောက် မခံရဘူးဘူး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.